ISITUDIYO ESIFANISHIWE ESINOKUNGENA OKUNGEMPELA - I-Airbnb
ISITUDIYO ESIFANISHIWE ESINOKUNGENA OKUNGEMPELA
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Mary Jane
U-Mary Jane Ungumbungazi ovelele
Indawo yokuhlala enhle, ezolile futhi ethule. Ifinyeleleka kuzithuthi zomphakathi.
Ungakwazi futhi ukubhuka nge-Abu Dhabi taxi App uma udinga itekisi. Inokungena eyakho, ihlanzekile futhi icocekile, enegumbi lokugezela elinamathiselwe, ikhishi, elinendawo encane evulekile. Azikho izinkinga zokupaka (izindawo zokupaka mahhala, izindawo ezingavaliwe ngaphandle).
Ukuhamba ibanga ukuya e-Al Ain mall futhi kunokufinyelela okulula ezindaweni ezinkulu.
Ngingumhlengi futhi ngiphakela amakati alahlekile endaweni yangakithi. Lindela ukuduka endaweni.
Izivakashi zingangishayela ucingo noma zingishayele i-Whatsapp ukuze zizothola usizo.
Akuyona indawo kanokusho, Iyingxenye yefulethi elidala, elinendawo yokungena yangasese. Itholakala endaweni yokuhlala kanye nebanga lokuhamba ukuya e-Al Ain Mall, izikhungo zezitolo, izindawo zokudlela, amabhange kanye ne-mosque.
Izitolo ezinkulu, izikhungo zezitolo, ama-mosque, izindawo zokudlela amahhotela namabhange.
Ibungazwe ngu-Mary Jane
Ngiyabuhlonipha ubumfihlo bezivakashi zami kodwa bangangishayela ucingo noma bangithumele i-WhatsApp noma nini lapho bedinga usizo.
UMary Jane Ungumbungazi ovelele